War deg deg ah:Hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacidada Gacanta Carabta oo la diley – SBC
War deg deg ah:Hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacidada Gacanta Carabta oo la diley
Posted by editor on Siteenbar 30, 2011 Comments
Anwar al-Awlaki oo ahaa hogaamiyeyaasha sar sar ee Shabakada Al-Qaacida & xubno kale oo ka mid ah kooxdaasi gaar ahaan garabka AL-Qaacidada Gacanta Carabta ayaa ku geeriyoodey duqeyn xaga cirka ah oo ay gesteen ciidamo gaar ah oo ka socdey Mareykanka kuwaasi oo duqeynta u adeegsadey diyaaradaha dagaalka.
Warar dhanka sirdoonka ayaa sheegaya in weerarka lagu diley Anwar al-Awlaki ay wadajir u filiyeen laanta sirdoonka Mareykanka u qaabilsan ee CIA-da & ciidamo gaar ah oo isku dhaf ah oo Mareykanka, waxaase soo baxaya warar isa soo taraya oo sheegaya in ciidamada hawlgalkaasi fuliyey ay ahaayeen kuwii 2-dii bishii May ee sanadkan dilka qorsheysan ugu geystey waqooyiga Pakistaan hogaamiyihii Al-qaacida Cusaama Bin Ladin.
Dilka Anwar al-Awlaki wuxuu noqdey kii ugu horeeyey ee loo geysto qof haysta dhalashada Mareykanka oo ay fuliyaan ciidamo Mareykanka ah.
Anwar oo ku dhashay wadanka Mareykanka wuxuu isku haystey jinsiyadaha Mareykanka & Yemen waxaana laga soo bilaabo bishii December 2007 uu ahaa bartilmaameedka Mareykanka taasi oo ka dambeysay markii uu si cad u sheegay in uu duulaan ku yahay danaha iyo dadka Mareykanka.
Obama oo saxiixay dilka Anwar al-Awlaki.
Markii uu soo baxay warka ku saabsan dilka Anwar al-Awlaki waxaa saxaafada ka hadley Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama isagoo booqanayey magaalada Arlington, ee gobolka Virginia, ayuu ku tilmaamay dilka Anwar al-Awlaki, “Jug culus oo soo gaartey Al-Qaacida, gaar ahaan garabkeeda sida firfircoon hawlglada u wada”.
“Wuxuu qorsheeyey hawgalkii fashilmay ee lagu doonayey in lagu qarxiyo diyaard Mareykanku leeyahay maalintii ciida Kirishtaanka ee sanadkii 2009-kii, wuxuu kaloo qosreeyey fulinta weeraradii kale ee fashilmay ee lagu doonayey in lagu qarxiyo diyaarado xamuul oo Mareykanku leeyahay sanadkii 2010, wuxuu kaloo si joogto ah ugu baaqayey dadka ku dhaqan Mareykanka iyo aduunka intiisa kale inay dilaan dumar, rag & caruur aan waxba galabnsan” ayuu yiri Obama.
Obama waxaa kale oo uu ku tilmaamay in horey loo qaaday masaafo durugsan xuduudii lagu jabin lahaa Al-Qaacida.
Qaabka weerarku u dhacay iyo cida la dhimatey Anwar al-Awlaki.
Weerarka lagu diley Anwar al-Awlaki waxaa si kala duwan oo is qilaafsan uga hadley Mareykanka & Yemen iyadoo wasaarada gaashaandhiga Yemen ay sheegtey in ciidamada Yemen ay dileen Anwar, laakiin Mareykanku waxay sheegeen in ay duqeyn ku dileen Anwar.
Ilo wareed oo dhanka qabaa’ilka ah ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in Anwar lagu diley subaxnimadii hore ee saaka weerar dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaarado kaasi oo lagu qaaday kolonyo gaadiid oo ay la socdeen xubno sar sare, weerarkaasi oo ka dhacay meel 8 Km u jirta magaalada Khashef ee gobolka al-Jawf oo 140 KM u jira magaalada Sanca ee caasimada Yemen.
“Argagixiye Anwar al-Awlaki ayaa la dilay, iyadoo lala diley saaxiibadiis” sidaasi waxaa lagu xusey fariimo text message oo ay saxafiyiinta u qaybisay wasaarada difaaca Yemen.
Awlaki oo 40 sano jir ah waxaa dadka la dhintey ee weerarkaasi lagu diley ka mid ahaa Samir Khan oo ahaa la tifaftiraha wargeyska Ingriiska ku soo baxa ee ku hadla afka Al-Qaacida ee , Inspire magazine.
Samir Khan oo haysta dhalashooyinka Mareykanka & Pakistani wuxuu ahaa qabiir ku xeeldheer cilmiga cumputarada isagoo heer sare ah u farsameyn jirey filimaanta ay soo saarto Al-Qaacida.
Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay dilka al-Awlaki ay Mareykanku qorsheynayeen bilooyinkii la soo dhaafay, iyadoo Mareykanku ay ku faaneen inay ilbaadsanayeen goor muhiim ah oo aanu ku dhex jirin dad shacab ah.
Bishii July ee sanadkan xoghayaha difaaca Mareykanka Leon Panetta wuxuu ku tilmaamay al-Awlaki in uu yahay haldoorka ay beegsanayaan isagoo ku lamaaniyey Ayman al-Zawahri, oo ah ninka badalay bin Laden.